Dowladda oo beenisay eedeyn loo jeediyay Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Dowladda oo beenisay eedeyn loo jeediyay Taliska Milatariga dowladda ayaa waxa uu iska fogeeyay eedeyn loo jeediyay oo ku aadanady inay gubeen Xarun Isbitaal oo ku taalla deegaanka Ceelasha biyaha.
Taliyaha gaaska labaad ee ciidamada Milatariga dowladda KMG Soomaaliya Jen. C/laahi Cismaan Cageey oo la hadlay Saxaafadda ayaa waxa uu beeniyay eedeyn loo jeediyay ciidamada oo ahayd in ay ka dambeeyeen Xarun Isbitaal oo lagu gubay deegaanka Ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho.
Cageey ayaa sheegay in ciidamadooda aysan ka dambeyn gubitaanka Xaruntaasi oo uu sheegay in aysan u dhaweyn halka ay ku taalo ciidamo dowladda ah islamarkaana aysan garaneynin cida ka dambeysa arrintaasi.
Taliyaha ayaa dhinaca kale mar uu soo hadal qaaday amaanka deegaanka Ceelasha biyaha iyo deegaanada kale ee ku yaalla inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye waxa uu sheegay in amaanka deegaanadaasi ay haatan soo wanaagsanaanayaan la iskuna haleen karo.
Shalay ayey ahayd markii rag sheegtay Maamulka Xarunta Isbitaalka ee lagu gubay Ceelasha biyaha waxa ay ku eedeeyeen ciidamada dowladda inay gubeen Xaruntaasi oo aysan kala cadeen waxa dhaliyay gubisteeda.